TECH Archives - XYZ NEWS
ဖုန်းကို ခေါင်းအုံးအောက် ဘာကြောင့် ထားမအိပ်သင့်တာလဲ .. ?
ခုခေတ်ဟာ စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ ခေတ်ပါပဲ။ လူတိုင်းဟာ သူတို့ လက်ထဲမှာ ဖုန်းမပြတ် ကိုင်နေ၊ ပွတ်နေတဲ့ ခေတ်ကို ရောက်နေတော့တာပါပဲ။ ဘယ်သွားသွား၊ ဘာလုပ်လုပ် စမတ်ဖုန်းကတော့ အမြဲတမ်း ကိုယ်နဲ့မကွာ ရှိနေတော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းပညာမှာလည်း …
April 3, 2020 By Editor KNOWLEDGE, TECH
ကိုယ့်ဖုန်း အဟက်ခံထားရပြီဆိုတာ သိနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
ဖုန်းတစ်လုံးကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဟက်လို့ရနိုင်လဲ ။ ဖုန်းတစ်လုံးကို ဟက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ Spy Phone App , Spyzie နဲ့ Spyera အစရှိတဲ့ App တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ဟက်နိုင်သလို အင်တာနက်ကဖေးတွေမှာလွှင့်ထားတဲ့ ဖရီးဝိုင်ဖိုင်တွေကတစ်ဆင့်လည်း ဟက်နိုင်ပါသေးတယ်။ ထို့အပြင် SMS …
March 2, 2020 By Editor KNOWLEDGE, TECH
ဘတ်ထရီတွေ အားရှိလား၊ မရှိဘူးလားဆိုတာကို အလွယ်အတူသိနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ( ရုပ် / သံ )
ဘတ်ထရီတွေကအလွန်ပဲအသုံးဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်လေသုံးမရတာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်တယ်remote control တွေရုတ်တရက်အလုပ်မလုပ်တော့ရင်ဘတ်ထရီအသစ်အစားထိုးဖို့ရှာရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အချိန်ကုန်မယ်လေအိမ်မှာလည်းbatteries အသစ်အစားထိုးဖို့batteries အသစ်လိုက်ရှာရတာလဲမလွယ်လှဘူးဒီအတွက်ဘတ်ထရီတွေအားရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်။ ဘတ်ထရီတွေအားရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာသိရဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်ဘတ်ထရီတစ်ခုယူပြီးမာကျောတဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်ကိုပစ်ချလိုက်ပါအားရှိသေးတဲ့ဘတ်ထရီဆိုရင်အသံထွက်ပြီးပြန်ထောင်သွားပါလိမ့်မယ်အားမရှိတဲ့ဘတ်ထရီဆိုရင်တော့ပြန်ကန်ထွက်ပြီးလဲကျသွားပါလိမ့်မယ်ဒီနည်းလမ်းနဲ့ဘတ်ထရီတွေအားရှိမရှိစမ်းသပ်နိုင်တယ်။ ရုပ် / သံ Writer – Min Thu ( XYZ News )
February 24, 2020 By Editor KNOWLEDGE, TECH
ဖုန်းလေးလံနှေးကွေးခြင်းကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ( ၅ ) ခု
၁. နေရာလွတ်ပြည့်နေခြင်း Storage 16GB လောက်ကို 500MB လောက်ပဲ ကျန်အောင် ပြွတ်သိပ်သွင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းလေးလံလာမှာအမှန်ပါပဲ။ ဖုန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ App cache တွေကလည်း နေရာအများကြီးယူပါတယ်။ ဒီတော့ အသုံးမလိုတဲ့ App တွေကိုဖျက်ပစ်ပါ။ …
ကွန်ပြူတာကီးဘုတ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် လျှို့ဝှက်ချက်လေးများ
ကွန်ပြူတာဆိုတာဟာ ကိုယ့်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုပေမယ့် အသုံးဝင်အောင်သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီတော့ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးကို ဘယ်လိုလှည့်ကွက်လေးတွေနဲ့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာ ပြောပြသွားမှာပါ။ ၁- Control + T Browser မှာ အခြား Tab တစ်ခုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် မောစ်နဲ့ အပေါင်းလက္ခဏာကို သွားကလစ်နေဖို့မလိုပဲ Control …
February 22, 2020 By Editor KNOWLEDGE, TECH
သာမန်အသုံးပြုသူတွေမသိနိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းထဲက လျို့ဝှက် functions ( ၁၀ ) ခု
အခုခေတ်မှာ အိတ်ထဲမှာ ဖုန်းတစ်လုံးမရှိတဲ့သူဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားသွားပါပြီ ။ဒါပေမယ့် ဒီဖုန်းကို ပရိုဆန်ဆန်အသုံးမပြုတတ်သေးကတော့ တပုံတပင်ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီတော့ နေ့စဉ်သုံးစွဲနေတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကို ဘယ်လိုမျိုး ပရိုဆန်ဆန် သုံးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာပါ ။ ၁- ဘတ္ထရီ ဖုန်းဆိုတာ ဘတ္ထရီအားနဲ့သုံးစွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အားကုန်သွားတဲ့အခါ …
February 20, 2020 By Editor KNOWLEDGE, TECH
ကွန်ပြူတာအသုံးပြုသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ လျှိုဝှက်ချက် (7) ခု ‘
သင်မကြားဖူးလောက်သေးတဲ့ စမတ်ဖုန်း လုပ်ဆောင်ချက်အချိုု့
စစ်တမ်းတွေအရ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဖုန်းအသုံးပြုမှုတစ်ရက်ကို ပျမ်းမျှ ၄ နာရီခန့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကျင့်တစ်ခုအရ အသုံးပြုနေကြလုပ်ဆောင်ချက်တွေပဲ အသုံးပြုကြပြီး အခြား အသုံးဝင်တဲ့ လုုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပစ်ပယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းတီထွင် ဖန်တီးသူတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာအဆင့်မြင့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုထည့််သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဒီထဲကအချို့ကိုတော့ …
February 8, 2020 By Admin KNOWLEDGE, TECH
1-Christopher Vaughn Hassle ဆန်ဒီရေဂိုမှ အသက် ၅ နှစ်အရွယ်ဒီကလေးကတော့ သူ့အဖေရဲ့ XBox ထဲ့ ဂိမ်းတွေကို ယူဖို့အတွက် သူ့အဖေရဲ့အကောင့်ကို Forget Password နေရာမှဟက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို သူ့အဖေသိတဲ့အခါမှာ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ လုံခြုံရေးယိုပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း …
သင့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်းထဲကနေ ထုတ်ပယ်ထားသင့်တဲ့ အန္တာရာယ်များတဲ့ ဖုန်းဆော့ဝဲ App တွေ
၉။အဆင့်နိမ့် Browsersတွေ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့ အဓိကဖြစ်တဲ့ internetအသုံးပြုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့wifi တွေဘာတွေ ကတော့ နည်းပညာအသစ်တွေပေါ့။ဒါပေမယ့်သင့်အနေနဲ့ internet ကို မှန်ကန်တဲ့ App နဲ့သုံးသင့်တာပေါ့။ ၈။သင့်အချက်အလက်တွေယူသွားမယ့်App တွေ ဒီလို App တွေကိုတော့ ဘယ်တော့မှမထည့်သွင်းမိပါစေနဲ့။ဒါကသင့်ကို အနှောင့်အယှက် …